XOG: Kheyre oo ku Fashilmay Qorshahiisa Isku shaandheynta Wasiirada kadib Beelo ku dhagay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA XOG: Kheyre oo ku Fashilmay Qorshahiisa Isku shaandheynta Wasiirada kadib Beelo ku...
XOG: Kheyre oo ku Fashilmay Qorshahiisa Isku shaandheynta Wasiirada kadib Beelo ku dhagay
Xog gaara ayaa sheegeysa in markale uu fashilmay qorshaha uu waday Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu ku doonayay inuu isku shaandheyn ugu sameeyo Golahiisa Wasiiradda.
Qorshahan ayaa waxaa fashiliyay Muran iyo dood ka timid habka kuraasta Wasiiradda Xilalka laga qaadayo loo qeybsanayo, iyadoo si gaara ay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya cadaadis u saareen Beelaha Habar Gidir iyo Abgaal.
Ra’iisul wasaaraha ayaa doonayay in isbedel lagu sameynayo Golaha Wasiiradda loogana faa’iideeyo Xildhibaanada taageersan Dowlada iyo sidoo kale in lagu soo xero galiyo kuwa ku kacsan Dowlada si ay kaga mid noqdaan Nabad iyo Nolol.
Odayaasha Beesha Habar Gidir ayaa Ra’iisul wasaaraha u cadeeyay in shaqsi ay iyaga wataan ay doonayaan inuu xilkaasi qabto, iyagoona codsaday in meesha laga saaro xujada ah in shaqsi Xildhibaanada ka mid ah Kursigaasi wasiirka loo magacaabo.
Inta ugu badan Xildhibaanada Golaha Shacabka waxay taageersan yihiin siyaasadda Kheyre waxayna taasi ku timid in kuwa ugu dhaq dhaqaaqa badan uu ka dhigay Wasiiro halka kuwa kalena uu balanqaadyo waa weyn u sameeyay.
Previous articleMeydka Gabar yar oo si arxan daro ah loo dilay oo lagu arkay magaalada Gaalkacyo
Next articleXOG:Maxaa ka jira in Khilaafka xun uu soo kala dhex galay Madaxweyne Farmaajo iyo Kheyre?
Jabhadda ONLF Oo ku dhawaaqday Xabbad Joojin iskeed ah…
DAAWO: Koox Dilal ka waday Muqdisho oo la Qabtay, Sir ay Kashifeen & Haweeney ay dili rabeen oo Ooysay
‘QOOR QOOR wuxuu isku heystaa inuu wasiir dowle ka yahay dowladda Farmaajo’
Puntland oo dab ku sii shiday Khilaafka kala dhaxeeyo Hirshabeelle & Go’aank cusub
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo qaabilay Mas’uuliyiin ka socda Madaxa Hey’adda QM u Qaabilsan Cunada aduunka ee WFP….
Jabuuti oo qiil la yaab leh u sameysay Xariga Duuliye Fu’aad Yuusuf & Kiis cusub oo ku soo baxay
Shirka Wasiirada Amniga Dowlad Goboleedyada Oo Maalinti Labaad Ka Socda Kismaayo
Koonfur Galbeed Oo Bilowday Baarista Cudurka Coronovirus & Dhaqaatiir Caafimaad oo la geeyay Airporka
Lacag xad dhaaf ah oo la dul saaray gaadiidka dekedda Muqdisho kasoo qaada xamuulka